Ihe ọma nke data DNA nke mba na mgbakwunye na ịmepụta ikpe mkpegbu: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 September 2018	• 11 Comments
O doro anya na a kwụsịrị na Netherlands dum na ikpe Nicky Verstappen mere ka Jos Brech jide ya. Na mbu, DNA mere ka Jasper Steringa jide na ihe ndị Marianne Vaatstra, ya mere, DNA bụ ihe mepụtara. O nwere ihe ọ bụla mere ka ọ bụrụ usoro iwu ọhụrụ nke onye ọrụ akụkọ nta akụkọ bụ Peter R. de Vries gosipụtara, ya bụ 'ikpe site na mgbasa ozi'. Nke ahụ bụ isi uru. Ka anyị chee ihu na ya, ọ bụ nnọọ ihe doro anya nke ọma na Jos Brech bụ onye ikpe na ikpe ikpe a.
N'uche m, mahadum kwesịrị itinye okwu abụọ ahụ n'arụmụba ma tinye ha dịka ihe ọmụmụ na nkuzi ha. Ndị nkụzi kwesịkwara ịkụziri ụmụ akwụkwọ ha na Ọrụ Mgbasa Ozi Ọha nwere ike imebi iwu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa site na iji DNA site n'otu ikpe gaa na ọzọ. Nke ahụ e kwere na Jos Brech ya mere ụmụ akwụkwọ ahụ ahụla ihe atụ magburu onwe ya maka otu ị ga-esi edozi iwu site na ịghara ileghara iwu anya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọ a mpụ ọkàiwu na chọrọ irite a ọma n'akpa ego, ị ga-amụta ịgba nkịtị, na-eme ka ihe mgbochi dị otú ahụ iwu missteps. Mgbe niile, nke club na-eme ka ndị na-ewu ọhụrụ 'ikpe site media' usoro. Nke ahụ bụ ihe ùgwù. Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ na-ebu gị na-amụta otú sham ụka ma na-arụ ụka na TV na TV ikpe Peter R. de Vries, ka na-enye echiche na-abụ ezigbo ọkàiwu, ma ugbu a ịdọpụ uche onye nkiri si iwu na-ezighị ezi tracks . Ị mkpa a ọkàiwu n'ezie ịchịkwa otu NLP usoro ndị dị ka nghọta management ka Jeroen Pauw na emo ya Player dị ka Peter R. de Vries. Ọ bụ ihe magburu onwe ọrụ na-enwe ike ibu PSYOP ọkàiwu. Ọ na-adịkarị na-enye abụba Mercedes na.
Ị nwere ike ịchọta DNA n'ebe niile ma debe ya n'ebe niile, n'ihi na ị nwere ike n'ezie wepụ ya na onye. Ozugbo i nwere DNA mmadụ, i nwere ike itinye ya na ọnọdụ mpụ; ma ọ bụrụ na ọchọrọ, na akwa akwa ma ọ bụ ebe ọbụla ịchọrọ. Ọ bụghị na nke a mere na nicky Verstappen ikpe. Nke ahụ ga - agba izu na ị gaghị achọ ya. Itunanya bu na, ọ bụ na-ekwe omume n'ihi na DNA emepụtaghachi synthetically, ma na ọ dịghị ihe ga-eme ihe ziri ezi na ihe ngwa ngwa na-aghọ gharazie ịba uru mgbe ị na-na-na-onwunwe nke DNA nke ọ bụla. Otú ọ dị, anyị dị mma na nchekwube. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịsị na ọ bara uru ịkwụsị DNA nke onye ọ bụla na nchekwa data nke mba. Nke ahụ dị nnọọ ka ọ bara uru dịka ọ bara uru iji nweta mkpịsị aka na foto niile nke onye ọ bụla. Ọ bụrụ na achọtara onye ọ bụla, ihe niile ị ga - eme bụ ịchọta DNA ma nwee onye na - eme ya. Ọ dị mfe. Ị maara na ugbu a, m nwere ike ịnakwere?
Ọ bụrụ na ị na na na na onye agbata obi na kọfị bụ ịrụ ụka adịghị gị DNA n'ebe ọ bụla na oche, table ma ọ bụ a kọfị cup. Ọ bụrụ na otu onye agbata obi mgbe ahụ nwụrụ anwụ na ụbọchị abụọ na-emi odude ke ụlọ ahụ wee na ahu ya na-achọta zuru steeti decomposition (NFI-eme ka ọ gaghị ekwe omume na-egosi ọbụna igbu ọchụ ma ọ bụ n'ụzọ mmekọahụ) karịa anaghị Peter R. de Vries naanị dị nnọọ Tweet : Anyị nwetara ya! Mgbe ahụ, gị ọka iwu nwere ike na-Jeroen Pauw abịa na a na agbasa ozi n'ikuku na-arụ ụka ihe na babbling banyere cross ofufe, ma ọ bụ na-ama doro anya: Ị bụ ogbu nke onye agbata obi gị; ma ma ọ bụ na ọ na-gburu. Na ma ọ bụghị n'ebe ma eleghị anya ụfọdụ ịgba ọtọ foto nke onye agbata obi gị dị ka ndị inyom na-hụrụ gị PC. Ndị nwere N'ezie 100% ebudatara site na gị, n'ihi na ọchịchị na n'ụlọikpe na-enweghị ikike na-etinye ihe na gị na PC. Ọfọn, ha n'ezie nwere ikike, kama ha na-agaghị eme ndammana. Ka anyị ghara dịrị ụdị nile nke-apụghị ichetụ n'echiche ndapụta. Ka anyị bụrụ naanị nchekwube ma na-enwe banyere mba DNA database. Na kwesịrị nnọọ abịa!
Ọ nwere ike ịbụ na anyị na-egwuri site a psychological na ime (PSYOP) na hyped igbu ikpe nke onye dara na-mere, ma n'ozuzu na anyị ka nwere ike iche na ndị nwere DNA nke onye ọ bụla dị nnọọ uru. Ị nwere ike ịbịaru ngwọta n'ọnọdụ niile; Otú ọ dị ị gbanwee ma ọ bụ gbanwee ya. Ma mgbe ufodu, ịchọrọ ịchọta ihe siri ike nye ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ha n'ụzọ dị iche. Ntak-a?
Site n'ụzọ, ihe ka ọtụtụ n'ime ụmụaka ndị nọ n'okpuru 18 edepụtaworị DNA n'ihi na òtù ahụ nwere mgbị ụkwụ. Ihe profaịlụ DNA ahụ na-edozi anya (dịka iwu na-akwadoghị, ma nke ọma) na RIVM n'ime ala. The mma nke a na-- atụle dokwara nchekwube - ma ọ bụrụ na ihe atụ, ị nwere ike ịmepụta omenala ogwu ọ bụla Dutchman, i nwere ike omenala kwesịrị ekwesị ha DNA. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ na Alzheimer, ị nwere ike itinye ngwakọta na ogwu ga-edozi DNA a. Nke a ga-ekwe omume n'ihi na anyị amala usoro CRISPR ruo ọtụtụ afọ, ebe a pụrụ ịchọta koodu amapụtara (maka mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ ihe nketa) wee dochie ya. Dị ka ihe atụ, ị okenye ndị na-esi na ha kwa afọ flu ogwu nwere ike inye a obere mmezi ha ogwu, otú ha pụrụ ịrịa Alzheimer rụziri site ị. Nke ahụ bụ mmepe dị egwu! Ọ bụ ya mere ị ga-achọ ka mmadụ niile nwee profaịlụ DNA! Dịka ọmụmaatụ, ịnwekwara ike inyere ndị mmadụ aka n'ụzọ dị oke iche iche site na ime obere mgbanwe. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike inyere aka gbochie nsogbu akparamàgwà rụrụ arụ site na ọgwụ tupu oge eruo. Nke ahụ bụ ohere magburu onwe ya dị ka!
Ee, ugbu a iwu ka unu wee na-eji DNA na iwu nnyocha na naanị na naanị maka nnyocha nke na DNA na-ebelata, ma dabara nke ọma na ikpe Nicky Verstappen mere ya a anya mara mma ezigbo ike ịgbanwe. Ma ọ bụrụ na ọgwụ mgbochi amanyere bụ iwu na n'ọdịnihu dị nso, ị ga-enye gị a mma onyinye ndị dị otú ahụ a ogwu. Nke a na-achọ, n'ezie, ịkwa akwa mere vaccines, ma ọ bụrụ na ị maara onye na-abịa ụlọọgwụ, nke bụ n'ezie ezi. Olee adaba bụ na? Olee uru ọ bụ ọ bụrụ na ị na-dị nnọọ njikere neatly na akara iji mee ka na-aga n'ihu ụmụ amaala site ahaziri vaccines. Gịnị ka ị na-eche echiche otú echiche ike na-elekọta ọnụ ọgụgụ na ime mpụ ahụ anya n'elu 10 afọ? Great agbanyeghị! Ọ bụ ihu ọma na mba mmasị.
O doro anya na ịnwere ike ime nke a dịka ala. A sị ka e kwuwe, ị natalarị ahụ nke ụmụ amaala gị site n'iwu iwu ahụ. Ndị mmadụ nweziri ike ịhọrọ ma hà chọrọ ka ha ghara ịhapụ onwe ha maka uru nke onyinye, mana nke ahụ anaghị emetụta gị. Ugbu a ka iwu nke steeti na-achị ahụ ahụ. Ma ihe nke gị nwere ike ịga n'ihu. Ị na-eme nke a site na netwọk okporo ụzọ na ụlọ etcetera, n'ihi ya, i nwere ike ime nke ahụ na ozu ụmụ amaala gị.
Ihe nchekwa data DNA na-enye echiche ziri ezi na anyị ga-enwe nchekwube banyere nke a. O doro anya na ị nwere ndị na-eche echiche banyere ọdachi ndị ahụ na-ebido banyere ọchịchị Brave New World na akụrụngwa, ma ha bụ ndị na-enweghị atụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na optimist gị mgbe niile na-ele anya na nhọrọ na-ahapụ ndị ọzọ na usoro ziri ezi nghọta nke democratically hoputara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke na-eje ozi 1 mgbaru ọsọ: a ụwa ka mma maka gị!
Ihe ndekọ njikọ njikọ: buw.nl
Jos Brech bụ 100% onye na-egbu mmadụ ma na-akwa iko nke Nicky Verstappen ma bụrụ nke a ga-ejikọta n'ihu ọha!
DNA okwu anwansi nke na-edozi onu ogugu na igbu onwe ya!
Tags: databank, database, DNA, agba, Jos Brech, mba nile, Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen, Peter R. de Vries
26 September 2018 na 14: 40
"Iwu nke steeti ahụ na-achịkwa ahụ ugbu a"
Ọ bụghị nanị nke a bụ mgbe a na-akpọ gị nwụrụ anwụ? Ma ọ bụ, ọ bụ akụkụ nke ala mgbe ị na-akpọ ndị nwụrụ anwụ ma ọ pụtaghị na ị gaghị ekwe ka nke a?
Daalụ maka ọrụ gị, ọ na-eme ka o doo anya na ịkpachara anya ma na-enyo enyo na ị ga - eji ya tụnyere steeti na iwu ya nile. Ha na-aga n'ihu na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu bụ ndị kpuru ìsì na ya. Ma ọ bụ naanị naanị otu ọnụ ọgụgụ na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ bụ ndị kpuchiri ya; nke a na-enye otu mmetụta ahụ ...
26 September 2018 na 18: 03
Chee echiche banyere ajụjụ a ...
Kedu ihe bụ iwu ugbu a ugbu a? Onye nwe obodo gị ọ bụ ya? Ọ bụ onye nwe ahụ gị dum?
Ana m asị: ee
1 October 2018 na 09: 44
A na-esi na ndị mmadụ na-anwụ ma na-anwụ anwụ, ọ pụdịrị ịbụ ndị nwere ike ịgwọta ya. N'ọnọdụ ọ bụla, usoro dum nke ihe owuwe ihe ubi amalitelarị, ọ bụrụ na ọ bịara doo anya na ahụike ọrịa ahụ na-arịwanye elu na enwekwaghị ike ịzọpụta ya, ọ bụ nanị awa ole na ole fọdụrụ. Mgbe ahụ, ọ dị njọ ikwu banyere 'onye ọzọ', n'ihi na onye ọrịa ahụ anwụbeghị. A na-eme ọnyà ọgụgụ isi iji gbuo mmadụ ma ọ bụrụ na enweghi ike iji ụbụrụ rụọ ọrụ na ngwa ndị dị ugbu a. N'oge gara aga, enweghi vitamin ma ọ bụ n'ihi na enweghi ike igosipụta ha. Ugbu a, ha chere na ha maara ihe niile dị na sayensị, ma ihe ha maara ugbu a abụghị nke oge ọtụtụ afọ.
26 September 2018 na 16: 15
The na agbasa ozi n'ikuku ekwuru ụlọ 21-09 JL. Bụ akpali nnọọ mmasị karịsịa akụkụ ebe Roethof were olu "Ana m ugbu a gawa .." a mpempe NLP na ya kacha mma, o mere ka m chee na-eme ike na anyị na-ekiri ' ihe nkiri maka ìgwè mmadụ 'mba ebe ụgha na-achị na-aga agha
https://www.npostart.nl/pauw/21-09-2018/BV_101388634 (Site na 16: 08)
27 September 2018 na 19: 24
Ee ma otu esi ekwu okwu uzo ozo a ma tinye ya ozugbo.
26 September 2018 na 20: 04
Chineke-daa, ị ghaghị ịghọta na ihe omume dị mma na-agba ọsọ nke ị bụ akụkụ nke?
Biko webata m, nke a bụ gị.
26 September 2018 na 20: 51
Ebe ikpeazụ m biputere, na nke a.
Enweghị m ụmụ, mana DNA echeworị atụmatụ na nza niile!
26 September 2018 na 21: 28
26 September 2018 na 21: 41
27 September 2018 na 17: 07
ala nke Netherlands na ndị bi na ya na-ese onyinyo foto abụọ dị ike:
"NDỊ MMADỤ GA-ECHA. Ha agaghị ele anya na oge ha dị ogologo oge ka ha mara ihe na-emenụ. "
- Eric A. Blair (aka George Orwell) ihe ịrịba ama: 1984 (1949)
" Ihe akaebe na Gerald Roethof dị ka onye ọka iwu PsyOp na Jos Brech
Ụmụ anyị nwoke egbochila nnukwu ọgụ! Ọ dị mma na ndị uwe ojii nọ! »
Nleta nile: 16.029.832